South Africa's Mbeki Meets Zimbabwe's Mugabe
জুলাই ০৫, ২০০৮
Tsvangirai withdrew from Zimbabwe's June presidential run-off election because of what he called systematic violence against his supporters.
In other developments, a British newspaper says secret footage taken at a Zimbabwean prison shows how a supporter of President Robert Mugabe rigged the country's June 27th run-off election.
The film obtained by the "Guardian" newspaper apparently shows ruling ZANU-PF party officials forcing officers at Harare central jail to cast their ballots for Mr. Mugabe. It also shows a prominent leader of the opposition Movement for Democratic Change, Tendai Biti, in leg irons.
Separately, "The Washington Post" newspaper reports Saturday that Mr. Mugabe initially planned to give up power after losing the first round of the election.
The Post, citing sources at a key meeting, says military officials convinced Mr. Mugabe to remain in power by using the army to rig a run-off election.